हिजो, बिश्व उच्व शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर फर्केर आएकाहरुलाई सम्मान गर्ने गरिन्थ्यो । आज म, म जस्तालाई पनि सम्मान गरेको पाउँदा हर्षित छु ।
के मैले पनि जीवनमा हामी आफैबाट निर्मित सगरमाथा चढेको रहेछु त ? सफलतापुर्वक ?
विदेश यात्रा गर्दा एयरपोर्टमा पासपोर्टको रंग हरीयो देखेर तिमी उसको पछि लाग्नु भन्दै पछाडि धकेलिदिदाँ अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै मन कुटुक्क खान्थ्यो ।
के अब हामी सम्मानित हुने बेलामा आइपुगेका हाैं ?
संघर्ष त घरबाटै शुरु भयो ।
सरकारी कागजातले मलाई दुई वर्ष यौवन बनाई दिएको छ । मेरो जन्म ३ मंसिर २००६ मा गाईगोठमा भयो । त्यसैले मामा र बाजेले लक्ष्मी नै नाम दिए । मायाले बोलाउने नाम चै लक्षुमाया ।
औपचारिक न्वारान गरी मेरो नामाकरण नै गरिएनछ । ठीकै भयो । लैनचौर स्थित श्रीकन्या बिद्यालयमा मात्र तीन दिन स्कूल जान पाएँ । कारण अनेक थिए । स्कूलको औपचारिक शिक्षा मेरो कर्ममा रहेनछ ।
तेह्र बर्षको उमेरमा मेरो बिवाह गरिदिए । २२ बर्षको उमेरमा तीन छोरीको आमा भएँ । मलाई लाग्छ मेरो श्रीमान् बढो ह्याण्डसम थियो । जसको कारण उनका अनगिन्ती प्रेमी र श्रीमती भए ।
स्वभाविक हो राम्रा सबैलाई मन पर्छ । मैले धेरै कुरा बाँडिदिएको छु जीवनमा । मैले श्रीमान् पनि बाँडिदिएँ । कारणहरु अनेक थिए ।
मलाई आफनै भाई भारदारले, दिदी बहिनी, कुटुम्बले १२ बर्षसम्म खाना खान सम्म पनि बोलाएन् । तीन छोरीहरुको लालनपालन हुर्काउन मैले एकल जीवन नै रोजेँ ।
राम्री त म पनि थिएँ । म पनि दोस्रो बिहे गरेर कसैको भरमा परेर नयाँ जीवन जिउन सक्थेँ हुँला । तर, मैले त्यसो गरिन । राम्री भएर नै होला तत्कालीन समयमा म बिदेशीको घरमा काम गर्न जाँदा र आउदा धेरैले मन पराए । पछ्याए । तर मैले आफ्नै बाटो रोजे ।
सबै पुरुषलाई आफन्त अर्थात दाजुभाइको रुपमा नै व्यवहार गरें ।
२२६ मेरो जीवनको आत्मीय नम्बर भइदियो । यो नम्बरको टेम्पो नै पहिलो महिला ले चलाएको तीनपांग्रे सवारी साधन भइदियो ।
मेरो प्रिय नम्बर इतिहास भएको छ । मलाई तत्कालिन श्री ५ को सरकारले पहिलो महिला चालक भनेर घोषणा गरिदियो । मे सवारी चालक अनुमति लिने पहिलो महिला पनि भएछु ।
त्यो समय त्यति सरल थिएन । भएन । समाजले महिलालाई बाहिर जानपनि अनुमति नदिने समयमा म कुर्तामा सडकमा गुडिरहेको हुन्थें ।
सडकमा पाउने प्रतिक्रियाहरु राम्रा, नराम्रा अनेक प्रकारका हुन्थे । धेरै टेम्पो चढन हच्किन्थे । कारण म महिला चालक थिएँ । थोरैले टेम्पो चढ्ने कारण फरक थियो उनीहरु पछाडिबाट मेरो कपाल स्पर्श गर्न खोज्थे ।
अनेक अफ्ठ्यारा बाटा काटें । त्यो मेरो समयको दैनिकी थियो । मेरो यात्रा सरल बाटोमा गुडेको तीनपांग्रे टेम्पो जस्तो कहाँ थियो र, भयो र ?
समाजले बनाएको त्यो बाटो अझै जटिल र कठिन थियो । जुन अझै छ । कठिन र अफ्ठ्यारा मोड थिए । असोचनिय अफ्ठ्यारा थिए ।
कहाँ थिए र अहिलेको जस्तो फराकिलो र पिच गरिएका सडक ? कयौ मोडहरुमा सयौ अफ्ठ्याराहरु छलेर जोगाउँदा पनि चालक नै उछिट्याउन सक्ने खाल्टा र अफ्ठ्यारा थिए । हिम्मत नहारी होशियार भएर मैलै त्यसलाई खेपे । अर्थात ती सडक र मान्छेसँग जुधे ।
बिभिन्न कालखण्डमा आफुलाई सम्हालेको छु । उभिदिएको छु । कहिले आमा भएर, कहिले छोरी भएर । कहिले नेपालकै छोरी भएर ।
लक्ष्मी उड क्राफ्ट उद्योग
बिसं २०४३ का शुरुवात दिनहरुमा थोरै नाफा लिएर ठमेलका पसलहरुमा सामान बिक्री गर्न जान्थें । त्यसरी सानो पैसा उठाउन जाँदापनि गुण्डाहरु राखेर आक्रमण गर्न लगाईन्थ्यो ।
गुण्डाहरुको आक्रमणबाट बनेको खत अहिले पनि लिएर हिडिराखेको छु । त्यस समयमा मलाई कसले नै उठाईदियो र ? न त त्यो साहुजी जसले मेरै सामान बेचेर पैसा कमाइसकेको थियो, न वटुवाहरु जो दर्शक भएर हेरेर बसेका थिए । नजिकको प्रहरी प्रशासन र सरकारी प्रतिनिधि पनि थिएनन् ती दिन । र पनि म सम्हालिन्थे ।
हामीसँग उद्योग संचालन गर्न कच्चा पदार्थहरु छैन । मैले आफ्नै संघर्षमा अध्ययन गरें । काम सिके । ज्ञान आर्जन गरे । वागमती र बिष्णुमती नदीमा मिल्काएको राँगा र भैसीका सिंग, हाड र हड्डीको संकलन गरेर कच्चा पदार्थ को रुपमा बदलें ।
त्यसबाट सुन्दर हस्तकलाका सामान उत्पादन गरें । त्यसबाट बनाएको टाँक विश्व प्रख्यात भयो । मैले धेरै निर्यात गरे । त्यसपछि मैले नरिवलका बोक्राहरु, बिभिन्न बोटका छेस्काहरु, काठका टुक्राहरु पनि थप्दै लगें, कच्चा पदार्थको रुपमा ।
समय सधै एकनाशको हुदैन । अफ्ठ्यारा समयमा धेरै आक्रमण भइरहे । ठमेलको नसृहं चोकमा अर्को हमला भयो । मेरो प्रिय टेम्पो २२६ मा आक्रमण गरियो, टेम्पो कच्याककुचुक भयो । त्यहाँबाट पनि उठें ।
लक्ष्मी उड क्राफ्टमा पनि मजदुर देखि राजनीतिक परिवर्तनको नाममा अकाट्य आक्रमण गरियो । कम्पनी रहला वा नरहला भन्ने गम्भीर अवस्था समेत सिर्जना भयो । तर मैले हिम्मत हारिन ।
मलाई रुन आएन रुन पनि आएन, ठुलो स्वरमा हास्न पनि । तर ठुला आवाज निकाले गुण्डा भने भगाएँ, सधै ।
एक नारीले त्यो भन्दा धेरै के नै गर्न सक्छे र ? एक औरत क्या करे, एक लकडी क्या जले ?
सन् २००० मा बिडब्लुएन स्टार ग्रुपले मलाई गोल्ड मेडलले सम्मान गर्यो, अमेरिकामा । त्यो म मार्फत नेपाललाई गरिएको सम्मान थियो । त्यो बेलामा पनि मलाइ कसैले हेरेन । न जनता न सरकार ।
म सडकमा गुडिरहँदा आपतमा पनि समाजले सहयोग गरेन । मलाई बिश्व डबलीमा सम्मान गरिरहँदा पनि वाहवाही भनेनन् ।तर मलाई सम्मानले उत्प्रेरणा अवस्य मिल्यो ।
मेरो बंगलादेश, भारत र थाईल्याण्डका साथीहरुलाई राष्ट्रिय कदर गरेर स्वागत गरेको देखें । त्यतिबेला फेरी मेरो मन कटक्क खायो । सरकारलाई पनि कदर गर्न नआउने रहेछ । सरकारलाई र सम्बन्धितलाई यो कुरा गौण लाग्न सक्छ तर यसको प्रभाव अनन्त छ ।
आज मलाई महाराजगंज (लक्ष्मीको घर) को छोरी भनेर सम्मान गरिराख्दा म त यो देशकै छोरी हुँ भन्ने मनमा आइराख्या छ । जीवनका अनेक उतार चढावमा हिडिराख्दा आजभोलि ती अफ्ठ्याराहरु झेल्न म गीत गाउने गर्छु ।
जिन्दगीमा जहिले नि हाँस्न सिक साथी
दुःखसँग हात मिलाई बाँच्न सिक साथी
(सफल महिला उद्योगीको रुपमा स्थापित नेपालको पहिलो महिला टेम्पो चालिका लक्ष्मी शर्माले लायन्स क्लब काठमाडौंले सम्मान गरेपछि दिएको मन्तव्यमा आधारित)
प्रस्तुतिः दीपेन्द्र वज्राचार्य
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ८, २०७६, ११:२१:००
सहकारीले डुबाएको सिङ्गो गाउँ
धनगढीमा खाना महोत्सव १४ फागुनदेखि, राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने